भारतबाट आउने हवाई यात्रुलाई राख्न यी होटेललाई तोकियो क्वारेन्टिन, १० दिन बस्नैपर्ने Bizshala -
काठमाण्डौ । भारतबाट आउने हवाई यात्रुलाई राख्ने गरी सरकारले ८ वटा होटेल तथा रिसोर्टलाई क्वारेन्टिन तोकेको छ।
भोलि बिहीबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिने भए पनि भारतबाट सातामा दुई उडान हुने भनिएको छ। ती उडानबाट नेपाल आउने यात्रुलाई राख्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ८ वटा होटेल तथा रिसोर्टलाई क्वारेन्टिन तोकेको हो। मन्त्रालयका अनुसार गौशालास्थित अमादब्लम होटेल, रिडर्स इन र आनन्द आश्रम, एयरर्पोटस्थित एयरर्पोट होटेल, गुहेश्वरीस्थित माधव होटेल, गोदाबरीस्थित भ्यु भृकुटी, जगातीस्थित फार्म हाउस रिर्सोट र ए–वान रिर्सोटलाई होटेल क्वारेन्टिन तोकिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यी होटेल तथा रिसोर्टले भारतबाट आउने यात्रुलाई विमानस्थलबाट होटेलसम्म ल्याउनुका साथै खाना र बसोबासको सुविधा दिनेछन् । मूल्यअभिवृद्धि कर र सेवा शुल्कसहित बढीमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँसम्म मात्र शुल्क लिन पाइने गरी क्वारेन्टिन तोकिएको छ । भारतबाट आउने यात्रु १९ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम र एयर इन्डियाको समन्वयमा नेपाल पर्यटन बोर्डले यात्रुको विवरण लिने र यात्रुको क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ।
सहुलियतको खाद्यान्न बिक्रीवितरण रोकियो
काठमाण्डौ। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित दुई संस्थाले सरकारले...
काठमाण्डौ । राइड सेयरिङ टुटल र पठाओको सेवा पनि आजबाट सुचारु भएको...
व्यक्तिगत करको दर सार्वजनिक, अब आयको हिसाबले कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाण्डौ। आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि...
झण्डै साढे ४० लाखले लिए प्यान नम्बर
काठमाण्डौ । पछिल्लो समयमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्यामा...
उपत्यकामा कुन बार, कुन पसल खोल्न पाइन्छ ?(सूचीसहित)
काठमाण्डौ । उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरका...
निजी सवारी जोरविजोरको आधारमा चल्ने, सबै खालका पसल समेत खोल्न
काठमाण्डौ । असार ८ गतेदेखि काठमाण्डौ उपत्यकामा निजी सवारी साधन...
सरकारको राजस्व संकलन २५.४%ले बढ्यो, लक्ष्यको ९४.६% असुली
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारको कुल राजस्व...
मुद्रास्फीति बजेटमा तोकिएको सीमाभित्रै, वस्तु निकासी ३२.२% र
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अर्थात वैशाखसम्म उपभोक्ता...